“Barcelona kuma faraxsanaan doonto inay la ciyaarto Inter Milan” – Antonio Conte – Gool FM
Dajiye September 16, 2019
(Milano) 16 Sebt 2019. Tababaraha kooxda Inter Milan ee Antonio Conte ayaa aaminsan in kooxda Barcelona aysan ku farxi doonin kulanka ay la ciyaari doonto Nerazzurri.
Kooxaha Barcelona iyo Inter Milan ayaa isku arki doono groupka F ee tartanka Champions League xilli ciyaareedkan 2019/2020.
Isku aadkii heerka Group-yada tartanka Champions League ee lagu sameeyey Magaalada Monaco ee dalka Faransiiska bishii lasoo dhaafay ayeey Kooxda reer Spain ee Barcelona ka gashay guruub adag, waxaana ay Guruubka F la gashay Borussia Dortmund iyo Inter Milan.
Haddaba Antonio Conte ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada UEFA kahor kulanka ay habeen dambe kula ciyaari doonaan kooxda Slavia Prague ee tartanka Champions League wuxuu ku sheegay:
“Waxaan dooneynaa inaan ka dhigno taageerayaasheena inay ku faanaan nooca kubada ay jecel yihiin, wey adag tahay in la dajiyo ujeedooyin, laakiin waqti kaddib ayaan arki doonnaa”.
“Waxa ugu muhiimsan ayaa ah in la dadaalo, islamarkaana laga fogaado qoomamaynta, waan ogahay sida ay u adag tahay in lagu guuleysto Champions League, iyo sida ay u xanuun badan tahay guuldarda kulanka finalka”.
Intaas kaddib Antonio Conte ayaa ka hadlay kulanka ay isku arki doonaan Barcelona wareega group-yada ee tartanka Champions League wuxuuna yiri:
“In Barcelona ay qeyb ka tahay group-keena waa wax aad u fiican, waa kulan noo horseedi doona inaan sida ugu wanaagsan wax u qabano, waxaan sidoo kale qabaa in Barcelona aysan ku farxi doonin kulanka ay naga hor imaan doonaan”.
“Kulamada aan la ciyaareeno kooxaha waaweyn, waxay noqon doonaan sida ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo halka aan joogno”.